Dumarku Waxey Ubaahanyihiin dayactir Tolloow Raguna muxuu u baahanyahay,hadaba wax badan ka ogow ( Qalinkii Ibrahim Kalafoge) - iftineducation.com
Dumarku Waxey Ubaahanyihiin dayactir Tolloow Raguna muxuu u baahanyahay,hadaba wax badan ka ogow ( Qalinkii Ibrahim Kalafoge)
aadan21 / February 18, 2012
iftineducation.com – Markii aad aragto maqaalka magaciisa waxaad isleedahay maxaa loogula jeedaa dumarka waxey u baahanyihiin dayacrtir, dhabtii waxaad moodaa dhalintii iney is wada badaleen dhankastaba ha noqotee, raga qaar ayaa ku dacwoonayo dumarkii waa is badaleen waa in sidaan iska badalaan wey narogeen qayaano ayey nagu dileeen, halka dumarkana aay si said ah u eedeynayaan raga.
Akhristayaasha kobciye.com akhriste kamid ah ayaa nala soo xiriiray kaaso kasheeganayay qayaanada dumarka, waxaa dhab ah adiga oo soo jeedo in aan lagu qayaani Karin, balse haduu jaceylka ku indho tiro waxaa fudeyd noqoneyso in uu lamaanahaaga haduu ugu talo galo ku qayaani karo weliba si fudud.
Qofka lajeceylyahay ee qayaanayo qofka jeceyl wuxuu moodaa in uu ku
raaxeysanayo qayaanada maadaama uusan xanuun dareemeyn, balse waxaa xaqiiqo ah qofka laqayaanayo ee daacada ah inuu yahay qofka noloshiisa ku raaxeysanayo, waayo qofka daacada ah si walbo oo loo qayaano waxna ka halaabi maayaan, illaa uu waayo aragnimo ka kororsado maaheee.
Waxaan maqaalkan gaaban kula dardaarmayaa dumarka iyo raga kuwooda jaceylka u isticmaalo hub ayagoo u adeegsanayo qofka aay leeyihiin waan ku jeclahay, taasoo hadhoow sababi karto qoomameyn aad u xooogan marka intii aad dib ka qoomameyn laheyd marka horeba jaceyl xushmeey si aad adigana jaceylka naftiisa xushmad ugu heshid.
Jaceylku waa dareen kazoo ka bilowdo dhagaha ama indhaha, dabadeed si toos ah ugu gudbo qalbiga iyo dareemaha bini aadam-ka, jaceylku weligiis isma badalin mana is badali doono, keliya waxa is badalo waa jiilka soo baxayo ee waqtiga lajoogaa jaceylka ku dhaqmo.
Jaceylku wuxuu kusiinayaa waqti marka koowaad waa uu kula soo dersayaa hadii aad si qalad ah u isticmaasho waa uu kaa guurayaa qof si sax ah u adeegsanayo ayuu ladagayaaa, adigana waxaaa booskii jaceylka kuusoo badalayo, nabsi iyo musiiibo ku dul dagaalamayo dushaada, sidaasi awgeed marka uhoreyso oo uu jeceyl kugu dhaco si wanaagsanu adeegso si uusan ebidkiis kaaga guurin oo aad jaceyl noloshaada ku dhameysato.
Waxaa xaqiiqo ah inta aan dumarka la abuurin illaahey inuu abuuray ninka balse dumarka iyo raga midna jaceylka uma kala horeeyo, qofkii uu asiibo ayuu ku dhacaaa, sidaasi awgeed qofka ku jeclaado hadii aad xiriir kale leedahay waqtigiisa haka lumin ee runta usheeg, waayo runti qofka waa kanixisaa ee madisho, balse beentu qofka waa ka nixisaaa waana dishaaa, qalbigiisa si tartiib tartiib ah ayuu usii dhimanayaa illaa heer uu gaaro inuu bini aadam dhan aamini waayo.
Dumarka dabeecada ha iska badalaan intooda aaminsan in aay shukaansan karaan illaaa dhowr nin, waayo shukaansiga faraha badan wuxuu sababaa inuu jaceylku kaa guuro, markii aad dooneysid inaadan qof jeclaan ayaa qaabkaasi lasameeyaaa, sidaasi awgeed lacoloow ragga badan oo saaxiib kadhigo hal lamaane si uu asna saaxiib joogto ah kaaga dhigto.
Sidaa awgeed lamaano kasto waxaan leeyahay si aan leysku xumeen jaceylka dhabtiisa halagu dhaqmo hana laxasuusto xikmadaan gaaban aan maqaalka kusoo gabagabeynayo waxaana fahmi karo keliya qofkii dareen jaceyl haayo, dumarku waxey ka walwalaaan ragu wuxuu iloowsanyahay, raguna wuxuu ka walwalaaa dumarku waxey xusuusanyihiin.
W/D Ibrahim Ali Abdi “Kalafoge”
Kaniinyada Daahiya Biyaha oo ugu danbeyntii keena Kacsi la’aan !!!
Shiinaha oo soo bandhigaya filim ku saabsan burcad badeeda dalka Soomaaliya.